संसारकै सबैभन्दा महंगा नेयमार बने, १० महंगो खेलाडीमा को को परे ? « OsNepal News
संसारकै सबैभन्दा महंगा नेयमार बने, १० महंगो खेलाडीमा को को परे ?
एजेन्सी । ब्राजिलका स्टार नेयमार विश्वकै सबैभन्दा महङ्गो खेलाडीमा परेका छन् । एक अध्ययनकाअनुसार नेयमार संसारकै महंगा खेलाडी रहेको देखाएको हो । फुटबल बेन्चमार्क डटकमले अडिटर्स कम्पनी केपीएमजीसँगको सहकार्यमा हालै गरेको अध्ययनले नेमारलाई सर्वा्धिक मूल्यबान खेलाडीको पहिलो सूचीमा राखेको हो । नेमारको मूल्य २०६.५ मिलियन पाउण्ड रहेको छ ।
यसैगरी फ्रान्सका युवा स्टार केलियन एमबाप्पे दोस्रो स्थानमा छन् । एमबाप्पेको मूल्य १९३.१ मिलियन पाउण्ड रहेको छ । तेस्रो स्थानमा अर्जे्न्टिनी सुपरस्टार लियोनल मेस्सी रहेका छन् । मेस्सीको मूल्य १८३.२ मिलियन पाउण्ड रहेको छ । पोर्चुगिज सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो भने शीर्ष १० मा अटाएका छैनन् । १२ औं स्थानमा रहेका रोनाल्डोको मूल्य ९६.४ मिलियन पाउण्ड मात्र रहेको छ ।
एभिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपाल कीर्गिस्तानसँग पराजित
काठमाडौँ, २ भदौ, : एशियन भलिबल कन्फेडेरेशन (एभिसी) सेन्ट्रल जोन सिनियर पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन
एभिसी भलिबलः तुर्कमेनिस्तानद्वारा अफगानिस्तान पराजित
काठमाडौँ, २ भदौ : तुर्कमेनिस्तानले अफगानिस्तानलाई पराजित गरी एशियन भलिबल कन्फडेरेसन (एभिसी) सेन्ट्रल जोन सिनियर
फाटेको गोल्डस्टार जुत्ता लगाएर क्रिकेट खेलेँ : उपकप्तान ज्ञानेन्द्र
दमौली, २ भदौ : “जब मैले बच्चादेखि नै क्रिकेट खेल्न शुरु गरेँ मलाई आज यो
असोज दोस्रो साता ‘झापा स्पोर्टस् अवार्ड’ हुने
सुरुङ्गा, २ भदौ : असोज दोस्रो साता ‘तेस्रो झापा स्पोर्टस् अवार्ड’ हुने भएको छ ।